Archive du 10-nov-2020
Vady tsy manome vola
atao ahoana ?
Mampiady mpivady ny resa-bola raha vao tsy mirindra araka ny mangarahara sy ifandrimbonanny roa tonta. Na iray na roa mantsy no miasa ao an-tokantrano dia ilaina foana io mangarahara io raha vao vola no resaka.
Blush, mahamanjakely tampoka
Mandravaka ny laingon-tava ny « blush » na ny « fards joues ». Rehefa tena hainao ny manosotra azy io, dia mihiratra be ny endrikao iray manontolo ary mivoaka ny hatsaranny endrika
19 taona aho, mba tiako ho fantatra hoe :
firy andro ao aloha ana aorianny fahatongavanny fotoana kay no afaka manao firaisana ara-nofo raha tsy te ho bevohoka. Tsy mampiasa fiarovana intsony ve ?
Sakafo 15 manadio ny aty
Miankina aminny fahavitanny vatana manadio sy mamotika ireo poizina tafiditra ao anatiny ny fahasalamanny olona tsirairay.
Mampihena ny tapany ambony aminny vatana
Raha somary misimisy tavy ny tapany ambony aminny vatanao dia mety aminao tsara ireto fampihetseham-batana ireto satria mampihena manokana io faritra io.
Fomba hampitana hafatra aminny zaza
Tsy voatery hiteny mafy na hikitakita lava vao afaka mampita hafatra aminny zaza.
Alarobia : Kabaro sy henan-kisoa - 10.500Ar
Akora ilaina · Kabaro 2kp  3.000Ar · Henan-kisoa ½ kg  7.000Ar · Tongolo maitso sy voatabia  500Ar
Beyoncé: miompy tantely ary mitsabo ny zanany aminizany
Manana tranon-tantely maro be i Beyoncé ao aminy ary mamokatra tantely mihitsy aza ity mpanakanto ity. Isanny fialam-boly sy zavatra ataony tsy mbola noresahiny mihitsy izany fiompiana tantely izany, mialoha ny resadresaka niarahany taminilay gazety boky Vogue UK.
Vavikely : Vao teraka dia azo tevehina!
Tsy voatery ho hatao, fa miankina aminny safidinny ray aman-dreny izay miteraka vavikely ihany ny hoe : ho lavahana ve ny sofinilay zaza na tsia. Isanireo afaka manatanteraka izany ny etsy aminny Pavillon Sainte Fleur Ampefiloha.
Silipo tahaka ny ahoana no sexy aminao?
Zava-dehibe mihitsy, ho anny mpivady, ny silipo. Azo entina hanairana ny vady mantsy io akanjo kely io.
Shopping « Sac »
1. Sac GM en série - simili cuir - Page Facebook « Maximode » - Contact : 034 64 420 47